4 khuraafaad oo ku saabsan dhul gariirka | Saadaasha Shabakadda
4 quraafaad oo ku saabsan dhulgariir
ka dhulgariir Waxay yihiin ifafaale, caadi ahaan dabiici ah, oo ka dhacayay Dunida tan iyo markii la aasaasay. Intooda badan si dhib yar ayaa loo ogaadaa, laakiin kuwa yar ee la ogaadey, waxaa jira dhowr kuwaas oo noqon kara kuwo aad khatar u ah; maahan gariir laftooda, laakiin waxaa suuragal ah burburka suuragalka ah ee dhismayaasha, ama tsunami ay sababi karaan awgood.
Bini'aadamnimadu waxay muddo dheer isku dayday inay fahanto iyaga si loo saadaaliyo. Intaan ku sii soconno wadadaas, khuraafaadyo kala duwan oo ku saabsan dhulgariirrada ayaa soo baxayay. Waxaan kuu sheegeynaa 4 ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan.
1 Waxaa jira dad “saadaalin kara” dhulgariir
2 Dhulku wuu ku liqaa inta dhul gariirku socdo
3 Laba dhulgariir ayaa la isku xidhi karaa
4 Dhulgariirro waaweyn waa suurtagal
Waxaa jira dad “saadaalin kara” dhulgariir
Tani waa mid ka mid ah quraafaadka runta ah. Dad baa jira xasaasiyadda dhulgariirrada, taas oo ah ifafaale aanu saynisku wali awoodin inuu sharaxo laakiin taasi waxay u horseedaa dadka inay dareemaan dawakhaad, walwal, iyo / ama madax xanuun ilbiriqsiyo kahor inta uusan dhulgariirku dhicin maxaa yeelay bani'aadamka wuxuu dareemi karaa hirarka ka yimaada xudunta xudunta, gaar ahaan markaan seexanayno.
Dhulku wuu ku liqaa inta dhul gariirku socdo
Filimada khiyaaliga ah ee sayniska badanaa waa filimo khiyaaliga sayniska oo runta dhaafiya. Waana taas dhulgariir kuguma liqi karo, maadaama furitaanka ay ka tagayaan aysan u qoto dheereyn sida la rumeysan yahay, maadaama cilladaha ay yihiin kuwo taagan oo aan toosneyn.
Laba dhulgariir ayaa la isku xidhi karaa
Badanaa waxaa loo maleynayaa in laba dhulgariir ay la xiriiraan markay ku dhacaan masaafo dheer iyo waqti aad u yar. Laakiin dhab ahaan ma isku xidhan yihiin? Jawaabtu waa… maya. Mararka qaar waxa dhici kara ayaa ah in dhul gariir baaxad weyn leh oo ka dhaca meel cayiman, uu "sababo" gariir yar iyo mid aad u gaaban oo masaafo dhan kumanaan kiilomitir ah, laakiin maahan waxii caadiga ahaa.
Dhulgariirro waaweyn waa suurtagal
Laakiin aad uma badna. Baaxadda dhulgariirku wuxuu u dhigmaa dhererka cilladda keentay. Tusaale ahaan, qaladka San Andrés, oo dhererkiisu yahay 800km, ma sababi karo dhulgariir cabirkiisu dhan yahay 10,5. Ilaa maanta, dhulgariirkii ugu xumaa ee la diiwaan geliyo wuxuu ka dhacay Valdivia (Chile) Maajo 22, 1960, cabirkiisuna waa 9,5.
Ma taqaanaa khuraafaad kale oo ku saabsan dhulgariir?
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » 4 quraafaad oo ku saabsan dhulgariir
Spain waa wadanka yurub ee saameynta ugu badan ay ku yeelatay cimilada adduunka